iPhone 3GS - iPhone News | Vaovao IPhone
El iPhone 3GS Io no maodely iPhone fahatelo navoakan'i Apple, navoaka tamin'ny Jona 2009, ny mpandimby ny iPhone 3G dia mitazona ny endrika ivelany, fa mahazo tombony amin'ny fahombiazany, noho izany ny S for Speed, hafainganana amin'ny teny anglisy. Izy io dia manana fakan-tsary 3 Megapixel miaraka amina kapila fandraisam-peo voalohany amin'ny iPhone, RAM 256 MB ary processeur 600 MHz. Hita ihany koa amin'ny loko mainty sy fotsy ary manana tahiry 16 sy 32 GB fitehirizana. Manampia kompà nomerika amin'ireo sensor efa tafiditra ao amin'ny iPhone 3G.
Manomboka amin'ny 9 Jona dia ho lany andro ny iPhones sy Mac maro
Ho an'ny maodely Mac sy iPhone maro dia hisongadina indrindra ny volana Jona, indrindra ho an'ireo tompona maniry an'i Apple…
iPhones nipoaka, ny fihodinan'ny 3GS
ny Luis del Barco hace 7 taona .
Ny mponina iray ao Beijing, antsoina hoe Ma, dia nanamarina tamin'ny nofony manokana hoe inona izany no iharan'ny teknolojia, ...
Tutorial: havaozy ny iPhone 3GS-nao amin'ny baseband 6.15 (iPad) (na hafa) mankany amin'ny iOS 4.2.1 sy ny jailbreak nefa tsy very ilay unlock.
Ireo rehetra nametraka ny baseband an'ny iPad amin'ny iPhone 3GS anao hahafahana mamoaka azy, dia nanana olana vitsivitsy ianao: ...
ny Alexdef hace 10 taona .
Ahoana ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny bateria sy ny hafanana amin'ny Ultrasn0w 1.2 sy baseband 6.15 (havaozina)
Toa mpampiasa maro amin'ilay ultrasn0w 1.2 vaovao miaraka amin'ny baseband 6.15 ao amin'ny iOS 4.2.1 na iOS 4.1 no manana olana ...
Fampianarana hamaha iPhone 3G / 3GS amin'ny Ultrasn0w ho an'ny iOS 4.2.1 avy amin'ny Windows
Fiheverana: ny olona manana ny iPhone ao anaty vatasarihana fotsiny no anolorako an'ity tutorial ity ho fanavaozana sy izay mila ...
Fampianarana hamaha iPhone 3G / 3GS amin'ny Ultrasn0w ho an'ny iOS 4.2.1
Fikirakirana manokana iOS 4.1 + jailbreak vonona alaina
ny Gonzalo R. hace 11 taona .
Eto izahay dia mitondra anao firmwares manokana voaomana ho anao manokana. Voajirika daholo izy ireo ary aza mampakatra ny baseband (azonao atao ny mamoaka amin'ny ...
Fampianarana hametrahana iOS 4.1 amin'ny PwnageTool
Ireto ny torolàlana momba ny jailbreak ny iPhone amin'ny alàlan'ny PwnageTool 4.1 ho an'ny Mac. Miasa amin'ireo fitaovana manaraka ireo:…